Mgbakwunye nke ike na Prime Editing Platform nke Prime Medicine kwupụtara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mgbakwunye nke ike na Prime Editing Platform nke Prime Medicine kwupụtara
Prime Medicine, Inc., ụlọ ọrụ hiwere iji nye nkwa nke Prime Editing, taa kwupụtara mgbakwunye nke ike na ikpo okwu ya dabere na nyocha sayensị na nso nso a.
Keith Gottesdiener, MD, onye isi ụlọ ọgwụ Prime Medicine kwuru, "Anyị nwere oke ọhụhụ ịhụ nkwalite na -apụta nke ga -eme ka ohere ịdebanye aha Prime Minister bụrụ ụzọ ọgwụgwọ." “Ọganihu ndị a, n'elu teknụzụ ntọala siri ike, nwere ike ịbawanye arụmọrụ nke Prime Editing, ọ ga -agbasakwa ebe Prime Editing nwere ike rụọ ọrụ, nwere ike gbasaa anyị ruo ọrịa ndị ọzọ na -enweghị usoro nhazi mkpụrụ ndụ ihe ka nwee ike. ịdọ aka ná ntị. ”
Site n'ọganihu ndị ọhụrụ a nke ndị ọkà mmụta sayensị na mpụga, yana mbọ Prime Medicine na -aga n'ihu site n'aka ndị otu mmepe ime ụlọ, ụlọ ọrụ ahụ na -atụ anya ịkwalite nkwalite, nhazi, na arụmọrụ Prime Editing nke ọma. Ike akọwara n'akwụkwọ akụkọ ndị na -adịbeghị anya na Nature Biotechnology na Cell nwere ike ime ka mmepe nke ọgwụgwọ dị irè karịa site na ọrụ ndezi mkpụrụ ndụ ka mma.
Otu nkwalite gụnyere ntuziaka Prime Minister RNA (pegRNA) kachasị. Prime Editing na -eji molekul pegRNA chọta ebumnuche mkpụrụ ndụ ihe nketa yana iduzi ma ọ bụ dezie chọrọ. N'ime akwụkwọ e bipụtara na Nature Biotechnology na Ọktoba 4, 2021, ndị edemede nke David R. Liu, otu n'ime ndị guzobere Prime Medicine, gosipụtara na pegRNA (epegRNAs) kachasị, injinia nwere ike melite arụmọrụ nke usoro edezi ọtụtụ ugboro.
Ụlọ ọrụ ahụ na -achụkwa atụmatụ akọwara n'oge na -adịbeghị anya maka imeziwanye arụmọrụ site na imezi ụzọ nrụzi DNA akọwapụtara. N'ime akwụkwọ e bipụtara na Cell n'October 14, 2021, ndị ode akwụkwọ nke Liu na Britt Adamson duziri mata ụzọ nrụzi DNA akọwapụtara, nke a na -akpọ ụzọ mmezi adịghị mma, nke na -akwalite arụmọrụ nhazi nke ọma. Ha gosipụtara na enwere ike ịbawanye ọrụ ndezi ugboro ole na ole, yana ngwaahịa ndị na-adịghị mma nwere ike belata ugboro ole, site n'ịgbanwe ụzọ nrụzi na-adabaghị site n'ọtụtụ ụzọ.
Prime Medicine nwere ikike azụmaahịa sitere na Broad Institute of MIT na Harvard iji Prime Editing maka ebumnuche ọgwụgwọ mmadụ, ebe ndị sayensị na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa na -aga n'ihu na -eji Prime Editing maka ebumnuche nyocha yana ngwa ndị ọzọ.